चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९ महिनामा ३० गैँडा मरे | Safal Khabar
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९ महिनामा ३० गैँडा मरे
आइतबार, ०५ बैशाख २०७८, ०९ : ३९
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ३० गैँडा मरेका छन् । तीमध्ये २६ वटा प्राकृतिक कारणले मरेका हुन् भने चारवटा चोरीशिकारीले मारेका हुन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार पछिल्लोपटक वैशाख १ गते गैँडा मृतावस्थामा फेला परेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक कारणले २६ वटा गैँडा मरेका थिए । तीन महिना बाँकी रहँदा गत वर्षभन्दा बढी गैँडा मरेपछि निकुञ्जले गैँडा मर्नुको कारण पत्ता लगाउन समिति नै बनाएर काम गरिरहेको छ । प्राकृतिक कारणले मरेका गैँडा बूढो भएर, एकापसमा जुधेर, दलदलमा फसेर, बाघले आक्रमण गरेरलगायतका कारणले मर्ने गरेका छन् । निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या बढी हुँदा मृत्युदर बढेको अनुमान गरिएको छ । हालै गैँडा गणना भएपछि कुन क्षेत्रमा कति गैँडा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले तथ्याङ्क निकालेपछि आवश्यक भएमा आन्तरिक स्थानान्तरणसमेत गरिने बताए । चोरी शिकारी नियन्त्रणका लागि निकुञ्ज लागिपरेको छ । केही तस्करीमा संलग्न पक्राउ परेपछि थप चोरी शिकार हुन पाएको छैन । गत वर्ष चोरी शिकार शून्य रहेको थियो । बरालले प्राकृतिक कारणबाट मर्ने सङ्ख्या पनि घटाउने प्रयास जारी रहेको बताए । सन् २०१५ पछि यस वर्ष गैँडा गणना गरिएको हो । यस वर्षको गणनामा यस निकुञ्जमा ६९४ गैँडा भेटिएका थिए ।
यसअघिको गणनामा यो सङ्ख्या ६०५ मात्रै रहेको थियो । त्यसपश्चात स्नानान्तरण र चीनलाई उपहार दिइएको भए पनि सङ्ख्या भने वृद्धि भएको छ । बाढीबाट केही गैँडा बगेर भारत पुगेको अनुमान छ । भारतबाट १० वटा गैँडा फिर्ता ल्याइएको भए पनि अझै केही गैँडा भारतीय भूभागमा रहेको अनुमान गरिएको छ । आशा गरेअनुसार गैँडाको सङ्ख्या बढेपछि संरक्षणकर्मी उत्साहित छन् ।
#चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज
विभिन्न संघसंस्थासंग मिलेर नेपाल जर्नी संस्थाले गर्यो खाद्यान्न सहयोग
प्राध्यापक डाक्टर कृष्णभाइ प्रधानद्वारा तामिनका ४६ घरधुरीलाई राहत
प्रहरी टोली र मदिरा व्यवसायीबीच झडप, तीनजना पक्राउ
कटुवा पेस्तोलसहित एकजना पक्राउ
राउटे युवतीमाथि हिंसा गर्नेलाई कडा कारबाहीको माग
निषेधाज्ञाका कारण गहुँ खरीदको लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेन
दम्पती हत्या आरोपित सात वर्षपछि पक्राउ
एक नम्बर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
जसपाको दुवै पक्षको कारबाही निर्वाचन आयोगद्धारा अस्वीकार , पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय
सांसद नरोत्तम बैद्यविरुद्ध आपराधिक दुरुत्साहनमा मुद्धा दर्ता
बजेट पारित भएपछि प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन मुख्यमन्त्री राईको प्रस्ताव
संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता
प्रधानमन्त्री ओली दाहिना भएपछि इश्वर पोखरेल मालामाल !
उपेन्द्र यादवलाई पार्टी विहिन बनाउन बहादुरभवन नै सक्रिय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मार्ने षडयन्त्र कांग्रेसले बनाएको हो त ? : महेश बस्नेत
बागमती प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न ओली र माधव पक्षको संयुक्त निर्देशन
गण्डकी प्रदेशमा कोको बन्दैछन् मन्त्री ?
टिप्परको ठक्करले कार चालकको ज्यान गयो, प्रहरी भन्छ कारकै गल्ती
तनहुँका युवा समाजसेवी सोतीको पहलमा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
बौद्धमा भेटिएको मानव अंग : सिसीटिभीमा देखियो फालेको
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने– ओलीबाट निरन्तर नेपालको संविधानमाथि प्रहार
महामहिमलाई परिस्थितिले अन्तिम पटक सुध्रिने मौका दिएको छ : गगन थापा
महन्थ ठाकुरको काउण्टर : उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय
राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गरौं : गगन थापा